Long Shirt Shirt mpanamboatra - Sina Shirt Long Shirt Supplier & Factory
Marika CHECKEDOUT Item Code CM197C4100T2 habe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny akanjo mpanafika, ny fanamiana akanjo, ny lobaka ny akanjo, ny lobaka waiter, ny lamba 65/35 poly / cotton GSM 180g manjaitra kofehy Polyester kambana koa dia antsoina hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorim-paka amin'ny ...
Kapila Polyesterana Kapila Classic Long Sleeve waiter uniform Shirt CU1115C125000T6
Marika CHECKEDOUT Item Code CU1115C125000T6 Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy dia mpitafy fanamiana, fanamiana mientanentana, akanjo vita amin'ny akanjo lava vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny zato Xinjiang Aksu vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dravina, ny fotoam-panompoana in-2 toy ny mpandroaka mahazatra akanjo. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara ny abrasion resistan ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW197C4100T2 habe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny akanjo lava be, ny lobaka waitress, ny akanjo 65/35 poly / cotton GSM 180g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia corrosion-resis ...
Grey Polyesterana Grey Kamatasy Half Sleeve Slim Fit akanjo fitondra mitafy Shirt CM1102Z059000T4
Marika CHECKEDOUT Item Code CM1102Z059000T4 Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny akanjo mpanafika, ny fanamiana akanjo, ny lobaka antsasaky ny akanjo, ny lamba waiter ny lamba 60/40 poly / cotton GSM 143g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia manohitra ny fanoherana ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW1056C155000H habe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny akanjo lava be, ny lobaka waitress lamba 100% POLY manjaitra Thread Polyester kambana koa dia antsoina hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fehin-kase polyester dia miorim-paka, miaro ...
Grey Polyesterola Grey Kamatasy Half Sleeve Slim Fitaovana akanjo fanamiana CW1102Z059000T4
Marika CHECKEDOUT Item Code CW1102Z059000T4 Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny lobaka antsasaky ny lobaka, ny akanjo fitondra miloko 60/40 poly / cotton GSM 143g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery vaika. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fitrandrahana polyester dia corrosion-re ...
Polyester Cotton Classic Half Sleeve Slim Fit akanjo fitondra mitafy kaos CW1102Z104000T4
Marika CHECKEDOUT Item Code CW1102Z104000T4 Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny akanjo antsasaky ny akanjo, ny akanjo fitondra-mitafosotra ny lamba 60/40 poly / cotton GSM 143g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery vaika. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny feta polyester dia corrosion-r ...
Cotton Polyester Cotton Classic Long Sleeve waiter uniform Kaody CU1115C126000T6
Marika CHECKEDOUT Item Code CU1115C126000T6 Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny akanjo vita amin'ny akanjo lava ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny Xijiang Aksu 100% vita amin'ny landihazo vita amin'ny lamba vita any, Xinjiang Aksu lava vita amin'ny lamba, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dravina, ny fotoam-panompoana in-2 toy ny mpandroaka mahazatra akanjo. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara abrasion resistanc ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW1056C154000H habe S-3XL Ny teny fanalahidy ho an'ny fanamainty, ny fanamiana akanjo, ny akanjo lava be, ny lobaka waitress lamba 100% POLY manjaitra Thread Polyester kambana dia antsoina koa hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fehin-kase polyester dia miorim-paka, miaro ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CW167C0181E Lehibe S-3XL Ny teny fototra dia fanamainty mpitaiza, akanjo fanamiana akanjo, akanjo lava palitao 65/35 poloney / landihazo GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy mihetsiketsika, tsy mihemotra, tsy misy karazan-damba, kariaoty in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara abra ...
WINE RED Polyester Cotton Classical Long Sleeve Slim Fit waitress uniform Shirt CW167C0401E
Marika CHECKEDOUT Item Code CW167C0401E Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy ho fanamainty, fanamiana mientanentana, akanjo lava palitao 65/35 poly / landy GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy mi-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, abras tsara ...
BLACK Polyester Cotton Classic Long Sleeve Slim Fit waitress uniform Shirt CW181C0100E
Marika CHECKEDOUT Item Code CW181C0100E Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy fanamoriana milomano, fanamiana mandray marary, akanjo lobaka lava / akanjo vita ho an'ny akanjo 65/35 poly / landy GSM.146g Xinjiang Aksu vita amin'ny lava-paty, tsy mi-pilling, tsy mihemotra, tsy misy karazan-dranomaso, life service in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, abras tsara ...